Usule isidumo uthisha 'odlwengule' umfundi - Ilanga News
Home Izindaba Usule isidumo uthisha ‘odlwengule’ umfundi
Uzame wehluleka ukuvala umndeni wesisulu ngenhlawulo yezinkomo nemali
KUPUTSHUKE ukuthi ufake incwadi yokwesula isigubhukane emsebenzini uthisha wasePhumlani High School, eJozini, ochithwe ngumndeni ezocela ukuwuhlawulela ngenkomo nemali ukuwugeza ‘ngokudlwengula’ indodakazi (16) yawo ngo-Mgqibelo.
Kuthiwa lo thisha utshele isisulu ngesikhathi eqeda ukusigila ukuthi uyajabula ngoba selifezekile iphupho lakhe, kudala ayefisa ukuya naso ocansini kodwa esaba ukuseshela. ILANGA lithole ukuthi ngoLwesihlanu emini bekunomcimbi wokuvalelisa abafundi bakamatikuletsheni kulesi sikole. Kuthiwa umfundi onukubeziwe ubengekho esikoleni ngalolu suku.
Uyise wesisulu esingeke simdalule ukuvikela umgilwa, utshele ILANGA ukuthi indodakazi yakhe ihlala kubo nogogo wayo kwazise yena benomkakhe basebenza kude, babuya uma kuphele inyanga. Uthi indodakazi yakhe iziphethe kahle, kayihluphi, ihlala ekhaya.
“Ingane iphume ekhaya sekuhwalele kukhona ekuhambisa emzini kamfowethu omdala esakhelene naye, indlela idlula esikoleni. Isuke kwamfowethu ngabo-7 isibuyela endlini, iphelezelwa ngumfowabo omdala ozalwa ngumfowethu. Ngesikhathi besendleleni bezwe umsindo wengoma obusho phezulu esikoleni, abafundi bakamatikuletsheni nothisha bezijuxuza. Badlule esikoleni befuna ukubuka. Bathi kuqhamuke umsolwa wabacela ukuba bangene ngaphakathi,” kusho uyise wesisulu.
Uthi umsolwa nguthisha abajwayelene kakhulu naye, obejwayele nokumvakashela uma ebuyile.
“Izingane kazizange zimexwaye uma ethi mazingene ngaphakathi. Kuthe ngabo-10 ebusuku ingane yacela ukuthi bayiphelezele igoduke ngoba sekuhlwile. Ithi uthisha uyenqabelile, wayitshela ukuthi mayikhululeke iphephile uma ihleli naye ngeke kwenzeke lutho.
“Uhambe nayo nomfowabo wabayisa kwenye indawo yobumnandi, wafika waphuzisa umfowabo utshwala. Ingane ithi ibisilele emotweni njengoba ubengafuni ukuyigodukisa. Kuthe ngabo-3 sebebuya wadlula nayo ekhaya wayitshela ukuthi mayilale ekhotheji uzoyigodukisa ekuseni, uzoyilalisa ekhotheji lomunye uthisha,” esho.
Uthi nangempela uthisha uyilalise ekhotheji lomunye uthisha kodwa wabuye wayinyonyobela seyizumekile, wayinukubeza. Uthi ngesikhathi eyinukubeza uyitshele ukuthi selize lafezeka iphupho lakhe, ngoba ubesaba ukuyeshela. Ekuseni uyithathile ingane wayigodukisa ngabo-6.
“Uyigodukise nje bese bengifonele ekhaya bengibikela ukuthi ingane yami kayilalanga ekhaya,” esho.
Uthi seyifikile ekhaya, bamfonelile wacela ukukhuluma nayo, yaqala ngokuxolisa ngokungabuyi, yabe isicela ukuthi abuye ekhaya nonina ngokuphuthuma ngoba sekwenzeke lo monakalo.
“Ingilandise ngakho konke okwenzekile ukuthi uthisha wayo uyidlwengulile. Kangichithanga sikhathi ngifonele unina wengane ngazama ukuthola imoto ngahamba ngaya ekhaya ngeSonto ekuseni.
“Ngifike ngabiza amalungu omndeni wami wonke ngoba sakhelene, ngawabikela ngento esiyehlele indodakzi yami. Kuthe nje ngisaxoxa nomndeni wami kwangena ucingo ngifonelwa ngumfowabo omdala kathisha ethi ucela ukuzongibona bafuna ukuzoxolisa ngento eyenziwe yilo thisha.
“Kube yisikhashana wangena umfowabo wafika waxolisa, wathi bacela ukuhlawula ngenkomo ngomonakalo owenziwe yilo thisha, wakhala ngokuthi ubelingwe ngusathane. Ngibe sengicela ukuthi makangibizele yena azozikhulumela kugcwele namalungu omndeni ngoba ngifuna ukuzwa uhlangothi lwakhe.
“Ufike wasitshela ukuthi ubengathandani nengane futhi akakaze ayeshele, uvukwe yinkanuko esedakiwe, wabe esecela ukuthi akhiphe izinkomo noma ezingaki esizovumelana ngazo uzozikhokha nemali. Ngibatshele ukuthi mabahambe ngisazoxoxa nomndeni. Ngibaxoshe ngoba bese ngilithole lonke iqiniso ngokwenzekile,” esho.
Uthi udaba uludlulisele nasekhweni lakhe, babe sebehamba beyovula icala emaphoyiseni. Uthi indodakazi yakhe useyibhacisile ngoba ubesebona ukuthi kayisaphephile uma ihleli kubo yodwa.
“Ngifuna ukuthi lo thisha ajeze ngento ayenze endodakazini yami. Kuyimanje bangitshele ukuthi iyakhala uma ilala, ithi sibuya sonke isithombe sento eyenzeke kuyona. Okungikhathazayo wukuthi le nto yenzeka nje sekuzoqala nezivivinyo zokuphela konyaka. Sengesaba nokuthi le nto ingayilimaza indodakazi yami,” esho.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal uMnu Kwazi Mthethwa, uthi sebelutholile udaba ngezinsolo zikathisha osolwa ngokunukubeza umfundi.
“Siyazi ukuthi uthisha usezamile ukubalekela lolu daba, kodwa sizoqinisekisa ukuthi ubhekana namacala akhe uma sithole ukuthi uyathinteka emuva kophenyo,” kusho uMnu Mthethwa.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe amaphoyisa aphenya icala lokudlwengula, umsolwa ubengakaboshwa, basezithendeni zakhe.
Previous articleWagqugquzelwa ngumlimi angamazi
Next articleUHunt nobunzima kwiChiefs